Taariikhdeena | ALC Ozaukee
Xarunta Akhriska Dadka Waaweyn ee Gobolka Ozaukee (ALC) waxaa la aasaasay sanadkii 1988 iyada oo hawlgal lagu yahay Kaniisadda Grace Lutheran, Grafton. Markii hore kuwa yimid xarunta waxay u baahdeen in laga caawiyo akhriska, buuxinta codsiyada shaqada iyo barashada ku hadalka Ingiriiska. Bishii Meey 7, 2013 Xarunta Akhriska Dadka Waaweyn waxay noqotay 501c3 madax banaan. Grace Lutheran waxay sii wadaysaa taageeradeeda iyada oo siineysa boos xafiis, qolal barayaal ah, tasiilaad, taleefan iyo adeeg internet.
Noqoshada urur 501c3 oo madaxbannaan waxay ahayd tallaabo muhiim ah. ALC waxay aqoonsantahay ahmiyadaha ay xirfadaha qorista u leeyihiin bulshada deegaanka Ozaukee. Waxay ahayd hadafkeena in aan saameyn balaaran iyo qoto dheer ku yeelano Gobolka Ozaukee. Xirfadaha wax qorista ee hooseeya waxay saamaynayaan shaqaalaynta, heerka dakhliga, waalidnimada iyo caafimaadka. Waalid leh xirfado wax akhris / qoris oo hooseeya waxay u badan tahay inay lahaadaan ilmo leh buundooyin liita, arrimaha dabeecadda oo aakhirka waa laga tegi karaa. Sida ku xusan Isbahaysiga Qaranka ee Waxqorista iyo hagaajinta xirfadaha waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn waxay badbaadin kartaa $ 200 bilyan oo loogu talagalay barnaamijyada taageerada dowladda. Sidaa darteed, kor u qaadista xirfadaha waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn waxay ku yeelanaysaa saameyn wanaagsan dhammaanteen. Shaqo wanaagsan oo aqoon leh macnaheedu waa koror ku yimaada hufnaanta goobta shaqada, dakhliyada sare, qoysaska kuwa aad u madaxbannaan iyo carruurta leh mustaqbal ifaya.
Falsafadeena waxay diirada saartay midba midka; baraha iyo kal-fadhiyada ardayda halkii ay ku qaadan lahaayeen jawiga fasalka. Macallimiinta iyo ardaydu waxay dejinayaan hadafyo shaqsiyeed. ALC waxay u adeegtaa Barteyaalka Af Ingiriisiga, shaqsiyaadka isu diyaarinaya inay noqdaan muwaadiniinta Mareykanka, murashaxiinta GED, kuwa u baahan taageerada kulleejada iyo waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn.
Hogaaminta waxaa bixiya Maamulaha Fulinta-dhiman iyo Isuduwaha Waxbarashada Dadka Waaweyn ee Waqti-dhiman ah. Agaasimaha Fulintu wuxuu mas'uul ka yahay dhisida xiriirada dibedda, lacag ururinta iyo kor u qaadista aragtida ururka. Isku-duwaha waxbarashadu wuxuu mas'uul ka yahay xulashada manhajka, jihaynta / tababarka, la kulanka iyo qiimeynta baahiyaha ardayda.